Safari Technology Kutarisa kunosvika vhezheni 69 | Ndinobva mac
Mavhiki maviri ega ega vhezheni nyowani yeiyi yekuyedza bhurawuza inosvika nguva nenguva, iyo yakatangwa nguva zhinji. kweanopfuura makore maviri. Mune ino kesi, iyo nyowani vhezheni inowedzera shanduko mune yakasviba modhi asi izvo zvinowanzo gadziriswa zvimiro zvinotariswa pane mushandisi chiitiko chaicho.
Sezvatakataura, ndeye yakazvimirira bhurawuza kubva kune yepamutemo vhezheni yeSafari uye yemahara zvachose inogona kushandiswa nemunhu wese anoda uye ane Mac ine macOS Mojave kana macOS High Sierra. Mune zviitiko izvi, vashandisi vazhinji vanoedza iyi browser Mhinduro zhinji Apple ichagamuchira kuti uone uye kugadzirisa zvipuka mune zviri pamutemo vhezheni yebrowser. Ivo zvakare vanowedzera zvakafanira kururamisa mune inotevera vhezheni yeiyo yepamutemo browser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Safari Technology Preview inosvika vhezheni 69
Apple inogadziridza GarageBand, iMovie, uye iWork bundle maapplication pane macOS